rafozan-doza | Aogositra 2010
Androany 31 Aogosotra moa izany ny andron'ny blaogy, dia araka ny mahazatra, andro anetanana ny mpitoraka bolongana rehetra mba hampafantatra blaogy anaki-5 @ mpamaky... tsy dia hanao an'izay loatra ah, araka ny mahazatra ihany koa, fa hitohy hanentana antsika hiblaogy. Tsy hoe bezizo ah fa tena mihena otran'ny fean'antitra ny mpitoraka activa eto @ blaogasifera. Marary be mintsy ny foko
Haiko koa anefa fa misy olona maromaro vitsivitsy, vaovao sy taloha, te hanoratra mafy mahita ny lahatsoratra ataon'ireo akanga sisa nanamborana mamelona ny afo hidonaka eto @ blaogy.com, fa hoe misalasala noho ny antony marosamihafa... dia mba hoe ande ah hanao lahatsoratra mitantara ny mikasika ny antony sy fombafomba fataoko eto @ i baby fialam-boly. Ho famporisihana sy fankaherezana hamelona indray ilay afo mitsilopilopy ao amintsika ary koa mety fanazavana misimisy kokoa ho an'izay misalasala. Atolotra ho antsika rehetra ee... lavalava fa zarazarao ny fotoana hamakiana azy!
Asa, efa naheno daholo angambany isika an'le kozy hoe ny blaogy anie zavatra mba nalaza kely fotsiny tany @ 5taona lasa tany fa zao otran'ny hoe bandy vendrana sy tsy maharaka film izay variana @ zany e. Tsy haiko, mety marina izany, ny lamody miovaova araka ny toetr'andro. Kanefa hoy aho hoe tsy tokony ho raisina ho lamaody na hoe zavatra hatao mba hampalaza ny blaogy. Hoe hampitombo ny niveau an'ny "coolness" ao aminao izany. Ny tena marina tsisy afa-tsy i jentl** irery (sy soanja) no nazaka sipa teto. Noho izany tsy azo ampiharina eto angamba ilay hoe "aza variana na midonaka fa teto doly ny ol no naka" an. Mba tsy hisian'ny fahadisoam-panatenana no tena tiako hahatongavana hoe ho lasa role ra miblaogy. Tsia an!
Blog for a cause, blog for a reason
Ie, aza miblaogy raha tsy mahita antony manosika anao hiblaogy, raha tsy mahita hoe zavatra iray manokana misongadina aminao tianao ho zaraina @ hafa. Tsy hanjary ny dia raha ohatra ka hoe "impulsion" fotsiny no itondrana an'izany satria vetivety dia lefy raha hoe fahatairana tampotampoka tsy ampiheverana fotsiny no nanosika anao hitoraka. Izany koa anefa tsy midika fa hoe mila antony tena goavana be ary mila tena resy lahatra vao tokony mitoraka enao. Indraindray eo ampandrasana vao tena mahita ny atiny ary lasa hoe tia wazy an'le izy. Ny tiako tenenina hoe tsy voatery antony goavana be hoe hanampy ny kilema na hoe fanoherana na ho any na tsy hoany na'i Ra8/tgv akory fa na hoe fitiavana manjaitra na hoe manao tantara (coucou maeva ) na hoe resaka fiainana andavan'andro fa misy challenge kely tsy mitovy @ hafa, na tsisy koa aza tsy manin fa manome torohevitra mety mahasoa ny hafa... @ ilay film julie and julia iny zao resaka kaly ny anazy... tsy haiko ee, ny anah izao dia hoe resaka manala azy sy hoe tsy tiako ho faty ny blaogasifera.
You don't need to be talented
Ito koa zavatra tena mandiso hevitra be ny olona matetika. Tsy voatery hoe mpanao gazety na hoe mpanoratra boky na hoe poeta sy mpandalina haisoratra vao afaka miblaogy. Tsia an!
Rehefa manana antony hanoratana enao, araka ny efa voalaza etsy ambony, dia afaka manoratra. Aza matahotra fa mivoatra ary mihatsara tsikelikely au fur et a mesure manao an'zany enao. Otran'ny le mianatra mande ihany io ee. Misy hoe mandady alou zay vao mande izay vao afaka miazakazaka izay voa manao jeux olympika.
Ny tena olana, amiko aloha an, @ blaogy dia ny fandrindrana ny fotoana. Satria matetika enao kamo, rehefa mazoto anefa tsisy inspiraka... dia lasa hoe maty wazy le blaogy avy eo... ny vahaolana tsotsotra dia otran'ny projet atao rehetra ihany ee. Mila organization tsotsotra. Hoe rehefa tonga ny inspiraka dia soratana avy hatrany anaty bloc notes kely ilay hevitra idee general io izany... dia rehefa misy fotoana dia soratana @ izay ilay lahatsoratra. Tsy tonga dia avoaka fa tahirizina atao en stock, hoe itsinjovana ny vody andro merika refa tsisy inspiraka enao dia iny no avoaka... ra misy inspiraka moa dia jerena kely fotsiny hoe iza no mety kokoa sy hoe manaraka ny vanin'andro. Ny resaka bonne annee izao tsy dia mety loatra ra avoaka 26 juin ohatra...
ie, tsy nisy conseil de ministre na conference national nandidy hoe rehefa manao blaogy resaka sakafo i ketaka dia tsy mahazo manao resaka sakafo intsony i peta. Averina indray fa tsy ny hoe ho malaza no tanjona fa plutot hoe ilay sens an'ilay hoe mifandray sy mifampizara @ olon-kafa.
Mety hoe marina daholo izany rehetra izany kanefa mety manampy sy mamporisika kosa ra mba misy signe hoe mba misy mamaky sy mba "malaza" ny zavatra soratana ee. Marina izany, olombelona daholo isika ary taitra sy miraika @ fihetsika asehon'ny mpiara-belona sy olona ivelany. Ireto ary misy tips vitsivitsy nosoratan'i By Brenna Ehrlich and Andrea Bartz tao @ section blogging an'ny CNN -- nofitiniko fa ataovy translate @ GooGle ra mila dikan-teny malalaka:
* Ataovy specific ny lohahevitra global:
Tsy dia mety loatra ilay blaogy hoe general be hoe resahina daholo i babay sy lohavohitra ee. Ny resaka tsy voatery hoe ferana fa zany hoe tokony ho orienter-na @ lohahevitra na hoe "devise" anakiray izany. Rehefa resaka hatsikana dia ataovy hatsikana fa aza atao vary amin'anana hoe asiana resaka tena serieux be momba ny krizy politika. Ra hiresaka krizy politika dia ataovy hatsikana ihany koa izany... mora manana identite kokoa enao raha mijanona @ zavatra anakiray. Ohatra hoe ra vao misy miteny hoe what if izany zao dia tonga dia izany doty doty izany no any antsaina pre
Tsy ho "malaza" mihintsy enao raha ohatra ka mijanona @ tenanao irery. Otran'ilay hoe tsy hahazo asa eo mihintsy enao na dia faran'izay tena competent azany raha ohatra ka tsy mi-postuler @ offre izay misy. Tsy voatery hoe manatrika Tana miblaogy (tsara be ra afaka manao an'zany) fa hoe mba mamela hafatra any @ blaogin'olona na hoe miditra group sasan-tsasany any @ facebook na hoe toerana iray fihaonan'ny mpiblaogy ee. Ohatra hoe eto @ blaogy.com izao ra eto enao no miblaogy dia tsy maintsy hitan'ny olona rehetra satria mivoaka eo @ page d'acceuil... afaka atao status update @ facebook koa ny rohy @ lahatsoratrao dia mba itan'ny namana ohatra...
Mba fidifidio izay template ampiasaina sy ny lokon'ny soratra mifandraika aminy. Mba ho azo jerena ilay blaogy. Amiko manokana rehefa tsy bordel hoe mikorotana sy feno be loatra ilay pejy dia sa va sa va izay. Ny loko fotsiny no ampiadiana dia efa bonne. Eto @ blaogy.com manokana dia afaka ovaina araka izay hitiavanao azy mihintsy ny endrika. Mila mi-google css kely fotsiny...
Avoay ary asehoy ny talentanao. Asiana sary kely na hoe video kely raha ohatra ka azo atao izany. Ny hoe manasongadina an'ny zavatra ataonao izany ee. Ohatra hoe manao gateau ohatra dia mba asiana sary kely. Manjaitra dia otran'zany koa. Resaka fitaterana krizy politika dia otran'zany koa...
Ny fanana hevitra mifanohitra @ be sy ny maro indrindra no tena mampalaza ny blaogy. Aza matahotra izany fa tonga dia potsero ny voamasony. Ohatra hoe: "any andakozia ny toerana sahaza ny vehivavy?" mba eritrereto anie ee, iza no tsy hamoaka hevitra @ izany?
Ka inona no manakana anao tsy hiblaogy?
** tairo mba anao cours any @ i toi any ny bandy, mety sa tsy mety?
08/31,2010 Sokajy iozifol